PP Spunbond Soosaarayaasha & Alaabada Dharka aan Xidhnayn | Rayson
Nooc ballaaran oo tayo wanaagsan lehPP dunta-bond-dhar non-tolmo wanaagsan waxaa bixiya shirkadda Rayson oo leh cabbirro iyo cabbirro kala duwan. Waxaan xardhay niche sida mid ka mid ah kuwa ugu caansan PP miiqda-bond-yada non-xidhka daabaca leh ee Shiinaha. Waxaan u adeegsanaa alaab ceyriin tayo sare leh iyo farsamooyinkii ugu dambeeyay ee soosaarka PP dhar aan tolmo lahayn. Mashiinkaani PP-ga aan-tolmo lahayn waa isku-dhafka ugu fiican ee adkeysi aan shaki lahayn, jilicsanaan, iyo xoog wanaagsan.
Polypropylene spunbond marovinn oo aan lahayn guga guga
PP Spunbond Dharka aan lahayn ee PPYPropylene waxay ka dhigan tahay dharka polypropylene-ku-xirnaan, waa xoog wanaagsan iyo buuq. Waa maaddaama saxda ah ee jeebka guga. Miisaanka dharka ayaa ah 60gro ilaa 80g leh ballac habaysan. Soojiin aan lahayn dharka lagu dhejiyo ee Soojiin ah wuxuu ku siinayaa qiimaha ugu fiican ee PP-ka ee ugu fiican ee qiimaha aan ahayn, ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto.
Dharka dharka lagu dhejiyo
Qulqulka dharka aan lagu dhejin karin.There waa laba nooc. Waa laba PC-yada oo aan isku xirnayn suufka.
PP ugu fiican PP Spunbond Dhar aan lagu dhejin karin qiimaha warshad joodariga -
PP ugu fiican PP Spunbond Dhar aan loo tolan oo aan ku jirin qiimaha warshad joodariga ah -.Waxaan nahay soo-saare ka mid ah PP Spunbond dhar aan lahayn oo aan lahayn wax ka badan 14 sano. ISO, BV& SGS Shahaado. Oo waxaan si toos ah kuugubixinaynaa PP si toos ah oo aan toos ahayn.Alaabteena ayaa qaadatay polypropylene sida shey ceyriin ah, oo leh heerkul sare oo dhalaalaysa, shaandheynta, sifeynta xarkaha, iyo kuleylka kulul, ugu dambayntii, ugu dambeyntiiba waxay ku dhex dhacdaa duubista.Tayada badeecadaheena waa la dammaanad qaadayaa oo dhalmada ayaa waqtigeeda ku habboon. Alaabada ugu muhiimsan: alaabta guriga aan ahayn (samaynta bacda / samaynta bacda dharka aan lahayn ee dharka ama beeraha beeraha iyo jardiinada isticmaalka dharka aan tooska ahayn / miiska ma aha.
Tayo sare leh polypropylene ah oo aan ahayn mid aan ahayn dharka geoten
Polypropylene-ka aan ahayn xaraashka geotexes-ka waa kuwa aan isku-xirnayn oo aan isku xirnayn oo laga sameeyay 100% polypropyle truds staple. Dhar-galka polypropylen-ka ah ee nonworken-ka ah waxaa loo isticmaalaa codsiyo badan oo kala duwan oo ku saabsan suuqyada deegaanka iyo guud ahaan, sida wadada wadada wadada, mashruuca dhismaha isboortiga, kala-goynta isboortiga, kala-goynta dhulka hoostiisa iyo ilaalinta iyo ilaalinta xeebta.
Tus qolka soosaarka soojiidashada
Foshan Rayson non-woven co., Ltd. waa soo-saareyaal xilli ah oo ku yaal warshadaha dharka ee aan la qorin ee sannadaha khibrad ah. Waxaa ka go'an in baaritaan aan la-fulini ahayn, horumarka, iyo wax soo saarka oo uu leeyahay 10 khad wax soo saar ah oo aan la soo saarin, oo ah soo saarida PP-ga ee loo yaqaan 'PP', SS-yada aan lagu dhejin lahayn, sms, irbad jilicsan oo aan lahayn , Oo leh miisaanka soosaarka ah ee 10gsm ilaa 150gsm gudaheeda ballaadhan 4.2m, iyada oo xaddiga wax soo saarka sanadlaha ah ee miisaankoodu yahay in ka badan 36,000 tan. Shirkaddu waxay awood u leedahay soo saarista dhar aan la soo koobi karin oo midabyo badan leh iyo cabirro badan, oo ku habboon adeegsiyo badan oo kala duwan.
Pp spunbond non jotatlex
Moonno aan la qorin Isticmaalka dhismaha iyo warshadaha muuqaalka muuqaalka markasta oo calaamad u sameeya iyagoo xasilinaya dhulka, hagaajinta dheecaannada goobaha iyo fidinta, isku-darka isku-darka iyo faafinta xamuulka la soo saaray. Dharkan aan loo dhejin karin ee dharka ah ayaa laga sameeyaa polypropylene spunbond aan lagu dhejin, caadi ahaan midab madow iyo cawlan. Dharku waa mid la heli karo, eco-eco-saaxiibtinimo iyo uv xasisan.
Wax soo saarka ugu weyn ee shirkadda Rayson
Foshan Rayson non-woven co., Ltd. waa soo-saareyaal xilli ah oo ku yaal warshadaha dharka ee aan la qorin ee sannadaha khibrad ah. Waxaa ka go'an in baaritaan aan la-fulini ahayn, horumarka, iyo wax soo saarka oo uu leeyahay 10 khad wax soo saar ah oo aan la soo saarin, oo ah soo saarida PP-ga ee loo yaqaan 'PP', SS-yada aan lagu dhejin lahayn, sms, irbad jilicsan oo aan lahayn , Oo leh miisaanka soosaarka ah ee 10gsm ilaa 150gsm gudaheeda ballaadhan 4.2m, iyada oo xaddiga wax soo saarka sanadlaha ah ee miisaankoodu yahay in ka badan 36,000 tan.
Dharka aan gooyn oo horay loo jaray oo loogu talagalay alaabta guriga
Rayson waa warshad xirfad-yaqaan ah oo sameynayd PP-ga aan lagu dhejin karin wax ka badan 14 sano.Dharka aan gooyn ee horay loo jaray waa mid ka mid ah badeecadeena oo inta badan loo isticmaalo alaabta guriga, sida joodariga iyo fadhiga fadhiga. Khadka hore ee loo goynta ayaa ilmada ka dhigaa. Waxay horumarin kartaa hufnaanta wax soo saarka ee furfuran. Dharka hore ee loo goyn karo ee loogu talagalay alaabta guriga waxaa loo dhoofiyaa suuqa Mareykanka iyo suuqa yurub.
Dharka dharka aan la tolo
Dharka dharka aan la toloDharka jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ayaa loo isticmaalaa daboolka joodariga oo ka dhigaya joodariyadda ku habboon.Cabbirku waa 2.1m ilaa 2.4m.Had iyo jeer 60gram ilaa 100grambeige, cawlan, midab madow iyo caddaan.
PP SPITHED PP Specunbond dhar aan lagu dhejin karin khararta
Dhar-galka aan isku-dhafka ahayn, hal nooc oo pp Spun Leund Bond LOVEN, ayaa lagu sameeyaa mashiin dhogor ah oo dammaanad qaadaya shabakadda, ama ku hayso websaydhka, oo ay weheliso linteditainal-ka. PP SPUN Bond Lond Agabyada dharka aan la tolan waxaa loo isticmaalaa inay yihiin xiidmaha kuleylka ama shey xirxiran ama aasaaska soo-saaridda soo-saarista, bustayaasha, iyo jaakadaha. Ku-dhejinta PP-ga ee PP-ga ee PP-ka ah waa sheyga ugu weyn ee sadaradaha. Waxaa loo isticmaalaa sidii dharka hoose ee joodariga. Dharka aan la soo koobi karin ayaa ku jira 70gr ilaa 100gros midab kala duwan. Rayson waa sawirka ugu fiican ee pp spun-bond-ka aan ahayn wax soo saarta. Ku soo dhowow si aad wax u weydiiso.
Dhar aan lagu dhejin karin oo aan ku xirnayn sanduuqa guga ee sanduuqa guga
Waxaan badbaadinaynaa dhibaatada markii aan soo saarnay jeebka guga waxaa ku jira buuq weyn. Waxaa lagu dhejiyay DOT-ga dharka dogow ee dharka ayaa badbaadin kara dhammaan dhibaatada sanqadha marka la soo saaro joodariga, fadhiga fadhiga iyo alaabada kale. Waa mid jilicsan oo la neefsan karo. Iyo stenght iyo ehelka ayaa ku sii wata heerka wanaagsan.
Biyaha u adkeysan kara dharka
Biyaha u adkaysan dharka aan loo adkeysan karin.Waxay u isticmaashaa xaashida sariirta caafimaadka iyo adeegyada la tuuri karo, tusaale ahaan maaskaro qalliin, gogosha qalliinka lagu tuuro.Waxaan haynaa cabir badan oo loogu talagalay macaamiisha doorta .and midab iyo garaam.Had iyo jeer ku xir boorso ama kartoon.